Taratasy fanovana - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Taratasy fanovana
Teo am-piandohan'ny 1er izany5. Tamin’ny taonjato iray, rehefa niezaka nampitony ny feon’ny fieritreretany ny moanina Augustinian iray antsoina hoe Martin Luther tamin’ny alalan’ilay antsoiny hoe fiainana tsy misy tsiny. Kanefa na dia nanaraka ny fombafomba rehetra sy ny didy tamin’ny fisoronana nataony aza izy, dia nahatsiaro ho tafasaraka tamin’Andriamanitra ihany i Lotera. Avy eo, tamin’ny naha-mpampianatra eny amin’ny oniversite nandinika ny taratasy ho an’ny Romana i Luther, dia nahita ny fanambaran’i Paoly tao amin’ny Romana. 1,17 voasarika: fa ao [ao amin’ny Evanjely] no anehoana ny fahamarinana izay manan-kery eo anatrehan’Andriamanitra, izay avy amin’ny finoana amin’ny finoana; araka ny voasoratra hoe: Ny marina amin’ny finoana no ho velona. Nanohina ny fon’i Lotera ny fahamarinan’io andalan-teny mahery vaika io. Nanoratra izy hoe:
Indray mandeha, ny Romana dia fitaovana lehibe tamin'ny famerenana ny fiangonana ho amin'ny finoana raha nanomboka ny fifohazana ara-pilazantsara izany. Nisy korontana hafa tsy ela akory izay nitondra antsika tany Eoropa tamin’ny 1916. Tao anatin’ny fandatsahan-dra tamin’ny 1. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny pasitera Soisa tanora iray dia nahita fa ny fomba fijeriny feno fanantenana sy malalaka momba ny tontolo Kristiana manakaiky ny fahatanterahana ara-moraly sy ara-panahy dia nohozongozonin'ny fandripahana sain'ny Western Front. Niaiky i Karl Barth fa teo anatrehan’ny krizy mahatsiravina toy izany dia nila fomba fijery vaovao sy azo tsapain-tanana ny hafatry ny filazantsara. Tao amin’ny fanehoan-kevitra nataony momba ny Taratasy ho an’ny Romanina, izay niseho tany Alemaina tamin’ny 1918, i Barth dia nanahy sao ho very ny feon’i Paoly tany am-boalohany ary halevina noho ny fanakianana sy ny fanakianana nandritra ny taonjato maro.